Wednesday September 16, 2020 - 10:19:41 in News by Xaaji Faysal
Dadkan caanka ah oo ay ka mid yihiin fanaaniinta iyo jilaayaas
Fanaanadda caanka ah ee lagu magacaabo Kim Kardashian West iyo toboneeyo kale oo ah dad caan ah ayaa ku dhawaqay inay joojinayaan isticmaalka cinwaanadooda baraha bulshada taasi oo ay uga cabanayaan faafidda " naceybka, borabagaadada iyo wararka beenabuurka "waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay Kardashian West.
"Iskama fadhin karo oo kama aamusi karo iyada oo shirkadaha baraha bulslahad ay aqbalayaan faafinta naceyb iyo warar been abuur ah," ayay tiri fanaanada Kardashian West.
"Wararka been abuurka ah ee lagu daabaco baraha bulshada waxay saameyn ku yeelanayaan doorashooyiinkeena islamarkana waxay minjaxabinayan dimuqraadiyadeena," ayay intaa ku dartay.
"Iskama fadhin karo iyada oo barahani bulshada ay iska indha tirayaan kooxaha iyo qoraalada fidinaya naceybka iyo wararka been abuurka ah," waxaa sidaasi barteeda Instagram ku qortay Perry.
Jilaaga Ashton Kutcher, oo ay ku xiran yihiin malaayiin qof ayaa sidoo kale ka qeyb qaadanaya joojinta isticmaalka baraha bulshada isaga oo sheegay "Aaladahan looma dhisin in naceyb iyo rabshado lagu faafiyo ".